Muxuu Kylian Mbappe Ka Yidhi Guul-darradii Lyon U Xambaarisay Manchester City? - Akhriso Sidii Uu Farxadda Ula Qaybsaday - Gool24.Net
Muxuu Kylian Mbappe Ka Yidhi Guul-darradii Lyon U Xambaarisay Manchester City? – Akhriso Sidii Uu Farxadda Ula Qaybsaday
Weerayahanka kooxda kubadda cagta PSG ee Kylian Mbappe ayaa ka dareen celiyey guushii ay kooxda ka dhisan waddankiisa ee Lyon ka gaadhay Manchester City, taas oo ay ugu gudubtay wareegga semi-finalka oo ay la ciyaari doonto Bayern Munich.
Lyon ayaa hore layaab usoo dhigtay markii ay wareeggii 16ka kusoo reebtay Juventus, waxaanay booskeeda ka diyaarsatay safarka siddeedda kooxood ee magaalada Lisbon diyaaradda u qaatay. Kulankii ugu horreeyey ee ay Portugal ku ciyaarto, waxay Lyon diyaaradda dib usoo saartay Manchester City oo ay kusoo garaacday 3-1.
Kooxda tababare Rudi Garcia ayaa u qalmaysay inay guuleyesato marka laga eego isku-xidhnaanta ciyaartoygeeda iyo sida ay fursadaha uga faa’iidaynayeen, waxaana laba ka mid ah goolasha u dhaliyey Moussa Dembele oo daqiiqaddii 75aad kusoo galay beddel.
Inkasta oo horyaalka waddanka Faransiiska ee Ligue 1 ay Lyon ka gashay kaalinta toddobaad, isla markaana uu madaxweynaheedu ku hanjabay inuu sharciga la tiigsan doono maamulka horyaalka oo kansalay ciyaaraha oo aan dhoweyn markii fayraska korona dunida ku baahay, haddana waxay shaqadeeda ka qabsanaysaa tartanka Champions League.
Kylian Mbappe ayaa markii ay ciyaartu dhamaatay, waxa uu farxadda la qaybsaday ciyaartoyda Lyon isaga oo kula dabbaal-degay baraha bulshada.
Farxadda uu muujinayay Kylian Mbappe may ahayn mid uu ku taageerayo Lyon, hase yeeshee waxa uu ku weynaynayay horyaalka waddanka Faransiiska ee Ligue 1 oo laba kooxood ku yeeshay afarta naadi ee iskugu soo hadhay tartanka, halka labada kalena ay yihiin Jarmal.
Lyon waxay la ciyaari doontaa Bayern Munich, halka PSG ay soo kala bixi doonaan RB Leipig. Waxay tani ka dhigan tahay in laba kooxood oo Faransiis ah ama laba kooxood oo Jarmal ah ay ciyaarta finalka iskugu iman karaan, haddii kalena ay laba kooxood oo midna Faransiis tahay midna Jarmal tahay ay iman doonaan.
Kylian Mbappe ayaa amaanay soo bixitaanka Lyon, waxaana uu tilmaamay inuu ku faraxsan yahay in laba kooxood oo Faransiis ah ay halkan yimaaddaan.
Farriin kooban oo uu kusoo qoray bartiisa Twitterka ayuu ku yidhi: ‘Horyaalka beeralayda’, taas oo uu ula jeeday in Champions League uu yahay midka beeralaydu xili ciyaareedkan iskugu soo hadhayaan, waana magaca ay iskugu yeedhaan reer France.